नेपाल आज | Wagonr को नयाँ कार बजारमा, थाहा पाउनुहोस् विशेषताहरु
Wagonr को नयाँ कार बजारमा, थाहा पाउनुहोस् विशेषताहरु
बिहिबार, २६ बैशाख २०७६ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
नेपाली समाजमा सवारी आवश्यकतासंगै प्रतिष्ठाको साधन मानिन्छ । अझ निजी सवारी साधनको बेग्लै महत्व छ । सवारी साधन मध्ये पनि कार नेपाली समाजमा अत्यन्त रुचाइने सवारी हो । अझ मध्यम तथा निम्न मध्यम स्तरीय परिवारका लागि घर, सन्तानलाई उचित शिक्षा दीक्षा तथा एउटा सवारी साधन जीवनकै लक्ष्य बन्ने गर्छ । अझ भनौं समाजमा आफूलाई स्थापित गर्ने माध्यमका रुपमा निजी सवारीलाई लिइन्छ । समग्रमा सवारी मानिसको सफलतासंग जोडिएको अपरिहार्य बस्तु बन्दै गएको छ ।
त्यसो त कुनै पनि सवारी साधन नेपालमा बन्दैन । विदेशबाट आयात गरिएका सवारी साधन अत्यधिक भन्सार शुल्कका कारण महँगो पर्छ । यसकारण पनि धेरै नेपालीको भाग्यमा निजी सवारी चढ्ने संयोग जुर्दैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य महँगो छ । बचत भएको थोरै रकमले कार किन्ने नचिताए हुन्छ । बजारमा नयाँ नयाँ मोडलका कार त छन, तर तिनलाई किन्ने औकात आम उपभोक्तामा छैन् ।
नेपाली समाजको यही मनोविज्ञान बुझेर हुनुपर्छ मारुती सुजुकीले बजारमा Wagonr 2019 को नयाँ मोडल बजारमा ल्याएको छ । मारुती कम्पनीका कार नेपालमा कति लोकप्रिय छन् भन्ने त ट्याक्सीमा त यसको एकाधिकार नै छ । अरु मोडलका गाडी उत्तिकै लोकप्रिय छन् । मारुती भनेको हनुमानको अर्को नाम हो । जसरी शक्तिको पर्यायबाची हनुमान मानिन्छ, त्यसैगरी नेपाल अझ भनौं काठमाडौंका सडकमा मारुती कम्पनीका गाडीको प्रभुत्व महसूस गर्न सकिन्छ ।
मध्यम वर्गीय हरेक उपभोक्ताले यो कार किन्ने हैसियत राख्न सक्छन् । सानो तथा सुखी परिवारका सदस्यलाई त यो वरदान नै हो भने पनि हुन्छ । थोरै बजेटको यो लक्जरी कार हो । हेराई, गुडाई र टिकाईमा सवैमा आकर्षक छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने मध्यम वर्गीय परिवारको बजेटमा यस्तो सुविधायुक्त कार दुर्लभ छ । उपलब्ध भएका विश्वसनीय छैनन् । विश्वसनीय भएकासंग आकर्षक मोडल छैन् । यस स्थितिमा Wagonr को vxi मोडलको कार लोकप्रिय हुनेमा शंका छैन् ।
कार त किन्ने तर यसको मूल्य कति ? उपभोक्ताको चासो आखिर मूल्यमा गएर ठोकिने नै भयो । WagonR को vxi १.० लिटर र १.२ लिटरमा यहाँको बजारमा उपलब्ध छ । यो कारको बजार मूल्य २४ लाख ९९ हजारदेखि २७ लाख ९९ सम्ममा उपलव्ध छ ।
WagonR को vxi १.० लिटरको विशेषता
१ आकर्षक बनोट
WagonR को vxi १.० लिटर कारको पहिलो विशेषता भनेकै यस्को आकर्षक बनोट हो । भर्खरै बजारमा आएको WagonR vxi १.२ लिटर निकै मनमोहक छ । यस गाडीमा स्ट्यान्डर्ड हेलोजन बल्वको साथमा डुवल हेड ल्याम्सको एसेम्बिलिङ पाउन सकिन्छ । सुन्दर रुपमा डिजाइन गरिएको हेड ल्याम्स र सुजुकी लोगोको साथमा रहेको फ्रन्ट ग्रीलले गाडीको अगाडि भागलाई निकै आकर्षक बनाएको छ । टल बडीमा डिजाइन गरिएको यस कारको हेड ल्यास मात्र नभएर टेल ल्याम्पले गाडीमा सौन्दर्य थप्न मद्दत गरेको छ । WagonR को यो मोडलको गाडी विभिन्न ६ रंगमा उपलव्ध छ ।
ग्राहक वर्गले कार किन्नुअघि विशेष ध्यान दिने भनेको गाडीको स्पेश नै हो । प्राय यो बजेटका गाडीमा स्पेश निकै कम हुने गर्दछ । जसका कारण गाडी पारिवारिक बन्न सक्दैनन् । तर WagonR को यो मोडलमा त्यो समस्या छैन । यो ५ सिटर गाडी हो । यसको वुट स्पेश पनि निकै ठूलो छ । जम्मा ३४१ लि. को वुट स्पेश यस गाडिमा पाउन सकिन्छ । साथै गाडडीको रेअर पेसेन्जर सीटलाई ६०/४० मा स्पीट गरेर यसको स्पेस बढाउन सकिन्छ । यस सुविधाका कारण गाडी पारिवारिक बन्न अझ मद्दत गरेको छ ।
WagonR को इटेरीयर डिजाइन औधी आकर्षक र आरामदायी छ । गाडीको ड्राइभिङ्ग डोरमा पावर उइडो कन्ट्रोल, डोर लकका साथै मिरर एजस्टेवल कन्ट्रोलरको सुविधा छ । गाडीको ड्राइभिङ्ग सिटको साथसाथै यस्को स्टेयरिङ सुविधाजनक छ । गाडीको स्टेयरिङमाम नै कल कल रिसिभर , ब्लुतुथ र म्यूजिक कन्ट्रोलरको सुविधा पाउन सकिन्छ । यसका अलावा गाडीमा एयर कन्डिसन, म्यूजिक सिस्टम, ब्लु तुथ कनेक्टर पनि छ । गाडीमा प्रयोग भएको म्यूजिक सिस्टम अहिले सम्मकै नयाँ डग वग सिस्टम हो । यसका अलावा गाडीमा अक्क सिस्टम पनि छ जसका माध्यमबाट पेन ड्राइभ , युएसबी केवल प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
‘गाडी बलियो इन्जिनले’ भन्ने त यसको नारा नै छ । वास्तवमा कुनै पनि गाडीको गुणस्तर तेस्को इन्जिनले मापन गर्दछ । यस गाडीमा k12mn सिरीजको १२०० सीसी ४ सिलीन्डर इन्जिन प्रयोग भएको छ । जस्ले गर्दा यस गाडीले पावर पिक अप निकै राम्रो दिन्छ । यस प्रकारको इन्जिन विगतमा विलासी तथा महँगा कारमा मात्र प्रयोग हँुदै आएको थियो ।
WagonR को vxi १.० लिटर गाडीमा यी वाहेक पनि अन्य थुप्रै विशेषता छन । डिजाइन, मूल्य र बनोटमा लोकप्रियता पाइरहेको यस गाडीले माइलेज भने २१.५ किलोमिटर प्रति लिटर दिन्छ । गाडी पारखीका लागि यो खुसीको खबर हो ।
यसरी राम्रो र भरपर्दो गाडी चढने सपनाबाट निकै पर रहेको नेपाली मध्यम वर्गीय परिवारको सपना मारुती सुजुकी WagonR मार्फत पूरा गर्न मद्दत गरेको छ । वजारमा चर्चामा रहेको यस गाडी किन्न नजिकैको मारुती सुजुकी सोरुममा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।